XOG: Minditiinta Islaamiga Qiil ma Ka Dhigan karaan “Waan Xanuunsannay, Ha naloo Tartiibiyo iwm” | Afrikada
XOG: Minditiinta Islaamiga Qiil ma Ka Dhigan karaan “Waan Xanuunsannay, Ha naloo Tartiibiyo iwm”
Jun 28, 2018 - Dhiibo Aragtidaada
Waxaa nagu maqaalo ah in ay xanuun sheeganayaan hogaamiyeyaasha ururada mintidiinta Soomaaliya, kuwaasi oo u muuqda in ay mashaakilkii ay qoorta la galeen ay ka qaadeen cudurro halis ah. “Hogaamiyaha Al-Shabaab waxaa laga soo sheegayaa ‘In ay Kaankaro ku dhacday’ waxaana ay Al-Shabaab u muuqataa mid ay dhibaatada dadka ay ku heyso darteed ay ‘Dadka Caqliga u wada’ ay gelayaan marxalado mucjiso ah.
Wax ciyaar ah maaha in aad u soo jeesato in aad Dabar-jarto dad masaakiin ah, ama cid aan waxba kaa galabsan aad Dab geliso, ama qarxi ama xabad ku dhifee.
Kansarka uu sheeganayo Abuu Cubeyda ayaa ah mid uu ku beer dulucsanayo ama ku raadinayo taageero dheeraad ah oo uu ka helo dad muslimiin ah, si uu rayidka ugu adeegsado in ay dagaallada uu hurinayo.
Waxaa kaloo isna bilaabay in uu xanuun sheegto hogaamiyaha Daacishta Soomaaliya Sheekh Cabduqaadir Muumin kaasi oo isagu sheeganaya in ay Sonkori ku dhacday sidoo kale waxaa laga soo sheegayaa cudurka Dhiig-karka.
Abuu Cubeyda (Al-Shabaab) iyo Sheekh C/Qaadir Muumin (Daacish) Maxay ugala jeedaan cudurrada aan daawada laheyn ee ku dhacay? Ma la dhihi karaan musiibadaan waa mid Alle uga aargoosanayo dhibaatada ay dadkooda ku hayaan, mase kuu muuqataa akhristow, in dadkani ay ka soo xaadirtay Cuqabadii ummadaha aan wax galabsan ee carruur iyo haween leh ee ay adduunyo darteed u baabi’inayaan.
Warbixinnada ka soo baxaya marka aad eegto dadka kooxahan ku jira ayaa silic u dhinta, waxaana sidoo kale ay si ka duwan qaababka kale ee Al-Qaacida ay fahmi la’ yihiin in ay si uun dhibkani uga baxaan. Sababtoo ah Afrikaanku weli ra’yi kama heysto horumarka iyo isbedellada qolyaha kale ee argagixisadu uga talo baxaan wixii ay sameyn jireen ee argagax ah.
Dowladda federaalka ayaa aaminsan in xitaa qofku isa soo dhiibi karo, xitaa haddii uu qaatil weyn ahaa, waxaana tani ay fursad weyn u tahay kuwa sanado badan dadka soo baabi’nayey. Waana arrin shartooda looga furfurayo dadka rayidka ah.
Waxaa laga weriyey Abuu-Saciid Al-Khudri (Allah haka raalli noqdee).
”In uu yiri, waxaan ka maqlay Rasuulkii Ilaahay (s.c.w.), Asagoo leh:
“Qofkii arkaa wax munkar ah ha ku reebo gacantiisa, hadduu kari waayo, haku reebo carrabkiisa, hadduu kari waayo, ha ka kahdo qalbigiisa oo ha isaga tago qolada xumaha xambaarsan markay xumaanta ku jiraan isagoon waxba ka qaban karin,, waana ka ugu iimaan daciifsan.” [Muslim].
Si kastaba ha ahaatee, waxaa hadda dadku u jeedaan sida ay noqonayaan hogaamiyeyaasha dhibaatada tooska ah ee aan dadbaneyn shacabka ku haya, xafiiska kore fursado badan ayuu siiyey hogaamiyeyaashani oo kale, balse waxa ay doorteen in ay dadkooda xasuuqaan kuwani, sidoo kale waa jiraan hogaamiyeyaal siyaasi ah oo dhibaato dadban dadka rayidka ah ku haya balse waa kuwo qarsoon oo xishoonaya, waxaana kuwa aan la xishoon dhibaatada ay samaynayaan iyagana ka soo muuqanaya calaamo siyaado ah oo muujineysa in ‘Isha dadka’ ay ku dhacday.
Hadaba sidee la isaga qaban karaa hogaamiyeyaashani xanuunsan?